Volavola ho an'ny mpanjifa sa endrika ho an'ny mpamorona? | Famoronana an-tserasera
Jorge Neira | | Graphic Design, General
Mpampianatra a faritra fahalalana Azo antoka fa zava-misy mahafa-po ho an'ny olona iray sy ny maro hafa raha toa ka manamafy izany ny andrim-pianarana na oniversite. Na izany na tsy izany, traikefa nahafinaritra tokoa izy io ary amin'izany lafiny izany, mandrisika ny fampiharana ny faritra izay nanapahanay hevitra hanome ny kaonty amin'ny fotoanantsika sarobidy. Azo antoka, fanombohana fotsiny ny fanamarinana ny tsy manam-petra niainana izay mety hanome antsika fianarana bebe kokoa noho izay azontsika any amin'ny oniversite.
Ok izao ny fifandonana ny zava-misy dia mitondra fahasamihafana amin'ny alàlan'ny default, izay amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia mety ho somary mangidy nefa ilaina amin'ny fampiharana matihanina antsika. Momba izany ny fanomanana atolotra ary mialoha ny hamarinan'ny oniversite antsika sy ny fanomanana atolotry ny arabe antsika (raha lazaina).
1 Inona no safidinao?
2 Inona no vahaolana? Inona no azontsika atao amin'ity toe-javatra ity?
Inona no safidinao?
Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny olana mety hitranga ao amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny famolavolana sary amin'ny fotoana fanatanterahana ny asanay sy amin'ny fotoana fanomezana fahafaham-po ny fangatahan'ny mpanjifanay. ¿Volavola ho an'ny mpanjifantsika na famolavolana ho an'ny endrika? Io no olana voalohany resahina ato amin'ity lahatsoratra ity.
El matihanina amin'ny famolavolana sary dia amin'ny fotoany voalohany, ny asany voalohany ary tsy dia miahiahy momba ny asany voalohany hatao izy, satria farany afaka mampihatra ny fahalalana rehetra ianao azony nandritra ny fampiofanana nataony.
Rehefa miasa sy mandefa mpanjifa ianao dia hitanao fa amin'ny ankamaroan'ny fotoana, tsy miraharaha ny fitsipiky ny famolavolana sary ny mpanjifa (Voasaron'ny mpamorona) ary ny tena mahaliana azy dia ny fahitana ny fangarony sary nalaina tamin'ny takelaka na taratasy. Ary tsy mifarana eto izany, tsara ny orinasa mihitsy no hamaly izany talohan'ity.
"Mpanjaka ny mpanjifa”Ho teny filamatr'ilay orinasa, ao amin'ny fikatsahana hisarika ny mpanjifa amin'ny fomba mety indrindra amin'ny orinasanao. Mazava ho azy fa tsy hamaly amin'ny fomba mahafa-po amin'ny asan'ny mpamolavola, satria, avy eo, momba ny maha-zava-dehibe ny fahafaham-pon'ny mpanjifa izany, ny mety hihoaran'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ny mason'ny mpamorona, mba hisarihana mpanjifa bebe kokoa amin'ny orinasa.
Ity zava-misy ity tsy dia tsara loatra ho an'ny mpamorona ary farany tena mamy ho an'ny mpanjifa, antony iray mahatonga an'io fahasamihafana io ho sarotra ho an'ny matihanina. Mety ho sarotra nefa tsy voatery ho ny toeran'ireo mpamorona ihany. Izy io dia ampahany amin'ny fanekena ary koa resaka fanavaozana ao anatin'ny fitsipiky ny mpamorona. Momba izany eritrereto ny momba ny mpanjifa sy ny fahafaham-po ananany mihoatra ny fitsipiky ny mpamorona. Raha fintinina, mifantoha amin'ny fitakian'ny mpanjifanay ary na dia tsy lojika toy ireo aza ireo, dia miezaha manarona azy ireo araka izay azo atao.
Amin'ny fomba fijery iray, dia mety ho mampivadi-po tokoa ary eny, tsy maintsy mamaly ny fitakian'ny olona iray izay tsy mandinika ny tenintsika ka hatramin'ny heverintsika fa miditra an-tsehatra izany. mety ho reraka be.
Inona no vahaolana? Inona no azontsika atao amin'ity toe-javatra ity?
Raharaha izany hainao ny mamaritra ny mpanjifanayNy momba ny fahazoana azy ireo, amin'ny fiheverana fa izy ireo no manjaka amin'ny lafiny teorika mifandraika amin'ny famolavolana endrika, ity manan-danja.
Ohatra iray amin'izany ny mozika ary raha milalao ho an'ny mpankafy metaly mavesatra isika, ny zavatra mety indrindra dia ny hampifaly azy ireo amin'ny sombin-tsarimihetsika tsara, na dia manam-pahaizana momba ny mozika aza isika ary manjaka amin'izany. fampiharana, fantatray izany izany no hahafahantsika mahazo tombony amin'ny farany. Avy eo ny fahalalana ny fomba hiatrehana ny be sy ny maro amin'ny mpanjifa, amin'ny alàlan'ny fahalalana ny fitakian'izy ireo sy ny fiheverany momba ny vokatra.
Volavola ho an'ny mpanjifanay mety ho fomba fanao tsara ary izany dia ho hitantsika hoe inona ny safidin'ny mpanjifanay. Ho fantatsika ny tena sarobidy eo amin'ny tsenantsika, amin'ny fiheverana fa amin'ny fotoana sasany dia hanana fotoana hivelarana amin'ny maha matihanina antsika isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Volavola ho an'ny mpanjifa sa endrika ho an'ny mpamorona?
elvis71 dia hoy izy:
Miarahaba anao amin'ny lahatsoratra, milaza aho fa ny iray amin'ireo vitsy (raha tsy izy irery) dia nametraka ny accents REHETRA (Marary aho noho ny fahatsoran'ireo zavatra nosoratana nefa tsy nisy pitsiny na kely aza ny amin'ny lalàna, indrindra ny feisbul ary tuitel). Fa raha tsara be ilay endrika, tsara kokoa ny ao ambadika, lahatsoratra tena tsara, nitranga tamintsika rehetra izy io, tsy nisy zavatra tsara kokoa mifanaraka amin'ny fahitanao ny an'ny mpanjifa, ary na dia tsy tokony hitranga aza izany, rehefa eo amin'ny antipodes ny mpanjifa ary mazava ny mason'izy ireo. Misy toerana hanatsarana azy, tsy azoko atao ny tsy hiara-miasa amin'ny mpanamory fiaramanidina mandeha ho azy, tsy mahasosotra izany, mila mahita ny lafy tsara fotsiny ianao, asa mitaky kely aminao ary tena afa-po amin'ny mpanjifa. Na izany na tsy izany, ity asa ity dia dingam-pianarana tsy tapaka ary misy fotoana tsy maintsy hahatongavan'olona "avy any ivelany" mba hahitantsika ny tsy fahombiazantsika na hianarantsika zavatra avy amin'ny olona ivelan'ny sehatra mihitsy aza.
Valio amin'i elvis71
Luis Valerio Brocca Chavez dia hoy izy:
Nandritra ny taonako naha Designer an-tsary sy mpahay sary, iray dia mifampiraharaha amin'ny karazana mpanjifa, misy ireo manome anao fahalalahana mamorona ary manao an-tsoratra tena manokana, izay mahafinaritra ny miasa ary misy ny hafa indrindra amin'izao fotoana izao izay manome ianao miasa aho ary mahatsapa ho toy ny mpamorona izy ireo, izay sarotra be ny miasa, izany no ilazako hoe: TSY METY INDRINDRA NY MPIVAROTRA, raha mikasika ny hoe Natao ho an'ny Mpamorona izy io, any dia hahafaty antsika ny mieritreritra toy izany, satria ao amin'ny sendikan'ny Mpamorona dia mihaona amin'ny jeneraly rehetra mahatsapa ny Coca-Cola farany any an'efitra ianao…. Fa ho ahy ny maha-Mpamorona sary dia iray amin'ny asa tsara indrindra azonao atao, satria tsy asa mitokana io ary ny ati-doha mitady hatrany hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa A JOB WELL WONE !!
Valiny tamin'i Luis Valerio Brocca Chavez
Mampiasa sary vongana